आज शुक्रबार माछापुच्छ्रे बैंकको कुन कुन शाखा खुला रहन्छन ? हेर्नुहाेस सूचीसहित — Sanchar Kendra
आज शुक्रबार माछापुच्छ्रे बैंकको कुन कुन शाखा खुला रहन्छन ? हेर्नुहाेस सूचीसहित
काठमाडौं । लकडाउनको समयमा पनि माछापुच्छ्रे बैंकले देशभरबाट सेवा दिइरहेकाे छ । आज शुक्रबार पनि माछापुच्छ्रे बैंकले देशभरका विभिन्न २३ वटा शाखा कार्यालहरुबाट ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेकाे छ ।
आज एक सुचना जारी गरेर बैंकले देशभरका २३ वटा शाखा कार्यालहरुबाट सेवा दिइरहेकाे जानकारी गराएकाे हाे । कुनै शाखा १० वजेदेखि १२ र कुनै ११ बजेदेखि १ वजेसम्म खुल्ला हुनेछन् । हेर्नुहाेस् थप जानकारीका लागि याे सूची..